Hawlaha Bridge ee '3' waxay ka bilaabatay Isgoyska Xuddur ee Habur | RayHaber | raillynews
Hometareenka3 Bridge waxay ka shaqeyneysaa waddada Habur Xuduudka
3 Bridge waxay ka shaqeyneysaa waddada Habur Xuduudka
19 / 02 / 2015 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Habur Border Gate ee xnumx'ünc Bridge Work bilaabaa: bixisaa xidhiidhka ka dhexeeya Turkey iyo waqooyiga Ciraaq, 3 in Habur Border Gate u dhow degmada Silopi Sirnak ee u adeegi doonaa marka lagu daro buundada bilaabeen inay u shaqeeyaan buundada xnumx'ünc.
Turkey, taas oo ay ku xirmaan ee waqooyiga Ciraaq, 2 dhow Xuduudka Habur ah Gate ee degmada Silopi of Sirnak ku daray in ay u adeegaan sida buundada bilaabeen inay u shaqeeyaan buundada xnumx'ünc.
Habur Border Gate Habur Border Gate The on durdur in Hezil ku taalla ee soo socda si buundada 2 ka dhexeeya Turkey iyo Ciraaq oo sabab raasamaal waa qalab sabab aan ku filnayn xnumx'ünc waxaa bilaabay dhismaha buundada. Hawlaha ay ka bilaabeen Ciraaq, laba guntin oo buundada 3 ah ayaa la dhammeystirey. Mashiinka dhererkiisu yahay mitirka 3 ballaaran iyo dhererka mitirka 35 wuxuu u adeegi doonaa jidka banaanka ee 286 iyo jidadka imaatinka 3. Habur Mülki Horjoogaha Maamulka Suat Demirci, Gudoomiyaha Degmada Silopi Ali Arıkan, Agaasimaha Gobolka ee Wadooyinka Diyarbakır 3'uncu Ahmet Sağlam iyo wafdi, si ay u arkaan buundada oo ka shaqeysa dhinaca waqooyiga Ciraaq ee shaqada buundada, waxay ka heleen macluumaad injineerro ku saabsan buundada.
Maamulaha Habur Mülki Suat Demirci ayaa sheegay in buundada 3 ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka isgoysyada wuxuuna yiri:
“Waxaan la nimid saaxiibo si aan u kormeerno hawlgallada buundada 3. Waxaan ku xallinay dhibaatooyinka buundadan waqti gaaban, ka dib waxaan raacaynaa shaqooyinka si aan si dhaqso ah ugu dhammeyno buundada oo aan u adeegno. Xilligan la joogo, shaqooyinkaan waxay ka bilaabeen dhinacan, laakiin waxaan qorsheyneynaa inaan ku bilowno mashiinka kale ee u imaan doona tuubada kale ee caajiska ah dhawaan. ”
Demirci wuxuu sheegay in marka la dhammaystiro buundada, baasaboorada transit-ka la siindoono si dhakhso ah dhibaatooyinkana ay ku dhamaan doonaan.
Için Maaddaama tirada haadka ay sii koreyso, waxaa suurtagal ah in si dhaqso leh loo sameeyo macaamil xawilaadaha dalxiiska. Khadkan wax badan kama jiraan. Gaar ahaan baabuurta yaryar iyo basaska ku jira kaararka dalxiisku waxay leeyihiin faa iido intaas la eg. Waxaan ka faa'iideysan doonnaa inaan u adeegno muwaadiniinteenna markii buundada 3 la geynayo ka dib markii la dayactiray oo lagu hagaajin lahaa buundooyinka kale. ”
Maareeyaha Maalgashiga Maamulka Khaaska ah ee Sirma iyo Maareeyaha Dhismaha Selma Özçınar ayaa sheegay in qandaraaska dhismaha buundada 3 la qabtay bishii Oktoobar ee 2014 wuxuuna yidhi: “Buundada Xurx 3 waa goobta dhismaha ee dhismaha. Buundadayada waxaa la dajiyay bishii Oktoobar halka 14 ay ku taal Oktoobar. Muddada buundadayadu waa mitirrada 286. Ballaca waa mitirrada 35. Haadka dibedda ee 3, haadka imaatinka 3. Ilaa iyo hadda, lugaha A2 iyo P7 ee buundada, oo ah labada qaybood ee caajiska ah ee labada lugood, ayaa la dhammaystiray. Daraasadaha ayaa sii socda. Qiimaha qandaraaska ee shaqada waa 24 milyan 432 kun oo rodol. Daraasadihii waa sii soconayaan ”.
Khudbadihii ka dib, masuuliyiinta Ciraaq waxay la kulmeen in muddo ah wafdiga Turkiga, ka dib waxay ku noqdeen Silopi.
Khadadka xawaaraha sare ee tareenka wuxuu u sii gudbayaa Habur Xuduudka
TCDD Nusaybin Cizre Silopi Habur Railway Mashruuca Sahaminta iyo injineernimada…
Guddoomiyaha Gobolka, oo baadhay 3 Bridge Bridge
2014 loogu talagalay Nusaybin - Cizre - Silopi - Habur Railway qandaraaska…
Dhirta iyo xayawaanku waxay daraasad ku sameeyaan marinka saddexaad
Go'aanka Qiirada-Sida Qaadashada Go'aanka Qadka
Marka buundada sare ay furan tahay